ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်သစ် တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်းဒေသတွင် တွေ့ရှိမှုကို သိပ္ပံပညာရှင်များ အတည်ပြု - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်း(ဝေဂါ)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် တွေ့ရှိရသော ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်သစ်၏ပုံအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇွန် ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်း(ဝေဂါ)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် တွေ့ရှိရသည့် ဒိုင်နိုဆောခြေရာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း (၁၁၄)ခုသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် သန်းပေါင်း (၁၃၅) က တီရိုဆော (Pterosaur)ချန်ရစ်ခဲ့သည့် အရိပ်အရာဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်း(ဝေဂါ)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ကျောက်တုံးများတွင် တွေ့ရှိရသည့် ဒိုင်နိုဆောခြေရာနှင့် ၎င်းတို့၏လမ်းကြောင်းပြပုံအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
၎င်းခြေရာသည် (၀.၃)စတုရန်းမီတာခန့်ရှိပြီး Junggar ချိုင့်ဝှမ်း Wuerheဒေသတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းနေရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံသိပ္ပံအကယ်ဒမီ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းနှင့် အတိတ်မနုဿဗေဒ (Paleoanthropology)သုတေသနအင်စတီကျုမှ သိပ္ပံပညာရှင်များက ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက အရှေ့ခြေထောက်အရာ (၅၇)ခုနှင့် အနောက်ခြေထောက်အရာ(၅၇)ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ရာ ခြေလေးချောင်းသတ္တဝါဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
လက်ချောင်းများ၏အရှည်စသည့် အင်္ဂါရပ်များကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် အခြားသိရှိပြီးဖြစ်သည် တီရိုဆော (Pterosaur)ခြေရာ (၁၅)မျိုးနှင့် ကွဲပြားမှုရှိသည်ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ယင်းမျိုးစိတ်သစ်ကို Pteraichnus wuerhoensis isp.nov.ဖြစ်မည်ဟု အဆိုပြုခဲ့ကြရာ ၎င်းမှာ Cretaceous ခေတ်အစောပိုင်းကာလက ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။
အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကို ယခုလအစောပိုင်းက နိုင်ငံတကာဂျာနယ် PeerJ အွန်လိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းဆောင်းပါး၏ဦးဆောင်သုတေသီ လီယန်၏ ပြောကြားချက်ရ တွေ့ရှိရသည့် ခြေရာများက အရွယ်အစားတူညီမှုမရှိသည်မှာ ခြေရာရှင်၏အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုကို ဖော်ပြရာ ဒိုင်နိုဆောတို့၏အုပ်စုဖွဲ့နေထိုင်တတ်သည့်သဘာဝ၏သက်သေဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ထိုစဉ်က Wuerhe ဒေသမှာ ရေကန်ကြီးတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ရာ ဒိုင်နိုဆောတွေရဲ့ ခြေရာတွေအများကြီးကျန်ရစ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ရေကန်မှာအစာရှာကြပုံရတယ်”ဟု လီယန်က ဆိုသည်။ （Xinhua）
Scientists confirm new dinosaur species found in Xinjiang
BEIJING, June9(Xinhua) — The discovery of 114 dinosaur footprint fossils, found in rocks in northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region, has been confirmed by scientists as traces left by pterosaurs 135 million years ago.
The dinosaur footprint site, only covering an area of 0.3 square meters, is located in the Wuerhe region in the Junggar Basin, where scientists from the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology of the Chinese Academy of Sciences have discovered 57 manus tracks and 57 pes tracks since 2006, indicating the trackmakers were quadrupedal.
After studying the main features, like digit lengths, scientists identified the tracks were different from those left by 15 other known pterosaur species.
Therefore, they proposedanew species as Pteraichnus wuerhoensis isp. nov., dating back to the Early Cretaceous period.
The study was published online earlier this month in the international journal PeerJ.
According to Li Yang, lead researcher of the article, the varied sizes of these footprints suggest that the trackmakers are of different ages and provide evidence that pterosaurs lived in groups.
“The Wuerhe region was dotted with large lakes at that time. The pterosaurs left numerous footprints, most likely because they went to lakes for food,” Li said. ■
A drawing of the new dinosaur species found in China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo provided to Xinhua)
Photo shows the dinosaur footprints found in rocks in northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region and their corresponding line drawings.(Photo provided to Xinhua)
အမေရိကန်နိုင်ငံ CDC က နိုင်ငံပေါင်းများစွာအတွက် ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ချက် ဖြေလျှော့ပေး
Sinovac ကာကွယ်ဆေးက ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၌ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် COVID-19 ဖြင့်သေဆုံးမှုကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချနိုင်ခဲ့